Abukar Arman: Fikrado Qotodheer oo Muslimiintu Xusaan Bisha Ramadaan – Radio Daljir
Abukar Arman: Fikrado Qotodheer oo Muslimiintu Xusaan Bisha Ramadaan
Juunyo 24, 2017 10:13 b 1
Qoraalka hoose oo markii hore ku qornaa afka Ingiriiska waxaa nala qaybsaday Abukar Arman, halkanna waxaan dhegaystayaasha iyo akhristayaasha Radio Daljir kula qaybsanaynaa tarjumaadda qaraalka
Qaybta 2aad (10-1): Ramadaan waa dhammaad, waxaana maanta idin la qaybsanaynaa 10 kii qodob ee ugu danbeeyey soddon qodob oo qotodheer oo Muslimiintu xusaan bisha Ramadan. Tobankaan qodob waan idiin dib-dhigay si ay u noqdaan kuwo aad xasuusnaataan bisha Ramadan kabacdi.
Toban, Jihaad kan ugu daran waa kan aad naftaada kula jidhid adiga oo isku dayaya in aad naftaada ka dhowrtid xumaato iyo damaca xunba. In aad qalbigaaga ka sifayso oo aad iska dhowrto damacyada ay ka mid yihiin gogol-dhaaf, masayr, xanaaq daran (ha sababo xanuun ama xanaf), iyo kuwaas oo kale waa ammuuro kuwa uga daran in laga digtoonaado.
Sagaal, xakamee qabkaaga (dadkana ha quursan) oo u noolow sidii qof aan dadka waxba dheerayn. Astaamaha qadduuca iyo kaligicunku waa kuwo laga fogaado, siiba kuwa awoodda ka agdhow iyo kuwa haya huggaanka bulsho.
Siddeed, Niyad sax ah iyo qalbi saafi ahi wax walba waa saxaan. Xaal adduunku wuxuu ku salaysanyahay wax walba iyo natiijadooda, meesha fooqa sare niyaddu wax walba xukunto.
Todoba, cibaadada iyo Eebbe kacabsigu waa halbowlaha nolosha. Waa mid noloshu ku dhisantahay waana kan mugdiga iyo jaahilnimada meel kaa saara. Cibaado tan ugu suubban waa adoo Eebbe mar kasta maanka ku haya, noloshaadana ku saleeya, ogaadana in aad hortagi doonto xaakinka dhammaan xaakimiinta.
Lix, masaakiinta, kuwa baahan, iyo kuwa dhibban garab-istaag, u hiilli, oo garbo-u-yeel. Haddii awooddu ay ku ciisho, qalbiga uga hiilli, kuwa dhibka ku hayana qalbiga ka nac.
Shan, aqoon-xumida iska dawee oo haddii aadan aqoon ama aadan hubin, weyddii kuwa yaqaan. Haddii xaqiiqadu kaa kala dhantaalantahay, ka raadi kuwa aqoonta ehel u ah, diin kasta oo ay haystaan.
Afar, meel iyo marxalad kasta oo la joogo, mid kasta oo idin kamid ahi waa huggaamiye. Marxalad kasta oo nololeed, mid qoys, mid bulsho, ama mid shaqo, iwm., qof kasta huggaan buu hayaa, sidaas darteed mid kasta waxaa lagu qiimayn doonaa sida uu uga soo dhalaalo waajibaadka saaran.
Saddex, jihaad kan ugu roon waa kan aad runta taabsiisid kuwo awoodda ka agdhow ee haya huggaanka bulsho. Ha saacidin kaligitaliye, ha yeelin kadeed, oo waligaa huggaan la’aan iyo dawlad la’aan ha ka dooran kadeed.
Labo, darisku xaq gooni ah iyo xuquuq bay kugu leeyihiin. Xin iyo xumaato ka dhowr, oo adoo dharegsan ha seexan ee hubi in darisku aysan gaajo la seexan. Daris waa kan 40 guri jiha kasta kaa jira.
Kow, runtu waa mid oo waa mid kaliya. Waa runta raagta oo aan marna isbadalin oo runtu waa Rabbi. Rabbi baa uunka abuuray oo waqtigana yagleeyey.
Runta ku dhaqan oo Rabbi xasuuso mar kasta iyo meel kasta.
Qaybta 1aad: 30-11
Bisha Ramadan ee barakaysan waa bil cibaado, waana bil nafta loo huro Eebbaha na abuurtay. Waa bil qofku dib-isku-xisaabiyo, dib-isku-daalacdo, isa saxo, asaga oo hubinaya shakhsiyaddiisa, macnaha Muslinimadiisa, iyo sidii uu u buuxin lahaa doorkiisa dunida.
Waa bil qofku iska nadiifiyo wixii qashin, qurun, iyo sun adduun qalbigiisa ku ururay, ogaanshihiisa iyo ogaansho la’aantiisba. Laakiin waxba waxbay ka muhiimsanyihiin e, bisha Ramadan waa bil laga rabo in qofka Muslinka ahi uu xasuusto, hadana uu xuso fikrado qotodheer oo Nabi Maxamed baray kuna baraarujiyey dadkiisii diinlaawayaasha ahaa, kuwaas oo xumaatooying badan faraha kula jiray, haba ugu darnaato gawraca gabdhaha dashay.
Waa soddon qodob oo qotodheer, waana sidan:
Qododobka soddonaad, in qof si caddaalad darro ah loo dilo waxay u dhigantaa adiga oo dilay ummaddii Eebbe oo dhan. Noloshu waa mid Eebbe barakeeyey, sidaas darteed ma ah mid u furan in qof uu si dheel-dheel iyo sharcidarro ah u burburiyo.
Labaatan iyo sagaal, Deganaansho iyo dulqaad baa daweeya qalbiga dhaawaca ah, xoojiyana xiriirka dadka ka dhexeeya. Aargoosigu xal ma keeno, waana sii xoojiyaha nacaybka iyo dhiigga oo si macno darro ah oo joogto ah u qulqula. Sidaas darteed cafi kuwa kugu xadgudba; raadi kuwa xiriirkaaga gooyey; gacanta u fidi kuwa xaqaaga iyo xuquuqda beeniyey, oo cafi kuwa kugu xadgudbay oo dhibbanaha kaa dhigay.
Labaatan iyo siddeed, wanaag sheeg ama shib ahoow. Carrabku caadi ma aha waana mid loo adeegsan karo sharka iyo khayrkaba. Ma jirto xubin la mid ah xubnaha qofka oo sida carrabku wax u bi’iyo u bi’in karta, ama sida uu wax u dhiso u dhisi karta.
Labaatan iyo toddoba, mar kasta muuji caddaalad, naxariis iyo dareen-wanaag. Sidaas darteed dadka isku si ula dhaqan oo ha soo kala dhawaysan, xataa kuwa aad is leedahay “ma ay astaahilaan.’
Labaatan iyo lix, mar kasta la jir oo la safo caddaaladda adoon ka jirin kuwa aad jeceshahay iyo waliba naftaada. Qabiilka iyo nin-jeclaysigu yaysan ku indhatirin oo yaysan ku illowsiin kuwa dhibban iyo kuwa la illaaway.
Arag Bogga Xiga > Hoos arag oo riix Page 2
Qormooyinka Daljir 51 Wararka 18333
Daljir oo Door ka Ciyaartay Agoon iyo Barakacayaal laga Faraxiyey (dhegayso)
Gudoomiyayaasha Dhalinyarada Maamul Goboleedyada oo Farriin u Diray Madaxweyne Farmaajo (dhegayso)
Cabduqaadir saalax axmid 3 years ago
Asc radio daljir aad iyo aad ayad umahad santihin dhaman shaqalaha daljir sido kale waxan halkan oga mahad calinayaa abukar arman o asigana maskaxdiisa waxa kujidhey halkan noogu so gudbiyey arman wan mahadsatahay e horey usi soc